Tombon'ny orinasa Bensen
Orinasa Bensen nandritra ny taona maro dia manizingizina ny kalitao aloha, ny mpanjifa ho an'ny tanjona, mifantoka amin'ny fampandrosoana ny fefy anatiny fiara. Bensen dia tao anatin'ny 10 taona niainana tamin'ny famokarana, ary manana ny atrikasa fanaovan-tsika sy ny famokarana ho an'ny mpanjifa tsirairay mba hananganana mety amin'ny haingon-trano anatiny fiara. Mandritra izany fotoana izany dia mandray ny haitao mandroso indrindra izahay ary ny akora tsara kalitao tsara indrindra ho an'ny hoditra microfiber auto. Bensen dia mamokatra vokatra tsara indrindra ary manantena ny hiara-miasa maharitra amin'ny talenta any ivelany rehetra. Safidinao tsy misy nenina ny misafidy an'i Bensen.
● Tombontsoa ho an'ny orinasa Bensen:
1. Bensen dia manana ozinina manokana ary afaka manome serivisy namboarina.
2. Manana firaketana lehibe amin'ny hoditra efa vonona halefa avy hatrany izahay.
3. 40+ loko isan-karazany amin'ny hoditra microfiber fiara ho an'ny safidinao
4. Ny vokatra Bensen dia misy amin'ny lamina maro isan-karazany, ao anatin'izany ny lamina BMW, lamina pinhole, sns. Ary misy koa ny fanaingoana mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
5. Azo omena santionany maimaimpoana mba hijerenao kalitao.
6. Ekipa matihanina hamahana ny olanao momba ny atin'ny fiara.
● Tombony ho an'i Bensvokatra en:
✧ Tombony amin'ny hoditra microfiber:
Auto microfiber hoditramanana loko isan-karazany, manana loko 40+ hisafidianan'ny mpanjifa izahay. Fahamaimainty miloko. Amin'ny alàlan'ny fomba ISO 105-X12, ny fahamainan'ny loko fanosotra ny hoditra microfiber an'ny Bensen ho an'ny fiara dia mety hahatratra 5. Izy io koa dia mahazaka ny herin'ny ranomaso 80N. Bensen'shoditra microfiber fiara saika miaina toy ny hoditra tena izy.
Fanoherana mahery vaika, mora diovina. Ny tasy kafe sy ranom-boankazo dia azo esorina amin'ny lamba famaohana lena; fanoherana tsara. Ny fampiasana isan'andro dia tsy misy akanjo, na dia ny fikorontanana amin'ny metaly aza, fa kosa afaka madio, tsy misy soritr'aretina hita miharihary. Bensenhoditra Suède automampiasa hoditra suède microfiber, rafitra manokana hiantohana ny fahaizan'ny rivotra mivaingana; traikefa mitondra fiara tsara kokoa. Izy io dia afaka manakana ny vatan'ny mpamily sy ny sezany tsy hikorisa rehefa mitondra fiara haingana. Ny loko feno kokoa noho ny hoditra PU, ary ny vokany hita maso dia mitovy amin'ny hoditra. Amin'ny loko mitambatra sasany, ny fijerin'ny maso dia mahery noho ny hoditra PU.
✧ Tombony amin'ny gorodon'ny fiara:
1.Ny rafitry ny landy, dia mety ho fanaraha-maso mahomby ny vovoka sy ny tsihy maloto ao anatiny, tsy mila karakaraina isan'andro, fa koa hitazomana ny fiara hadio;
2.Fitaovana avo lenta, fiainana fanompoana mihoatra ny dimy taona;
3.Ny maodely tsirairay dia handrefesana ny angon-tsoratry ny tongotra, natao manokana, tsy misy atahorana fiarovana;
4.Mats gorodona fiara tsy misy fiantraikany amin'ny fiarovana ny fiara, ny haben'ny tsihy tongotra dia ampitahaina amin'ny fiara tena izy, ny ampahany manan-danja, toy ny clutch, ny haben'ny throttle dia natao tsara, tsy hisy fiantraikany kely akory;
5.Ny loko dia feno, mifanaraka amin'ny safidinao.
✧ Tombony amin'ny seza ondana fiara:
Lamba cushion seza fiara an'ny orinasa Bensen mampiasa kofehin'ny zavamaniry madio, marefo amin'ny hoditra ary mahazo aina, manohitra ny bakteria sy anti-mangidihidy, tsemboka miaina sy tsara, manohitra ny static, tsy misy pilina, tsy sosotra, tsy mihorona, malefaka sy malefaka. Hoditra ambany mampiasa 1,4 mm elastika avo fiarovana tontolo iainana TPU hoditra foam iray, afaka miantoka fa ny sezan'ny seza malefaka malefaka, tsy mahazaka tsy mihetsika, tsy mifintina, tsy milamina. Ny famolavolana poakaty vita amin'ny hoditra ambany dia manatsara be kokoa ny fofonain'ny hoditra. Ary ny fampiasana haitao fanaovana amboradara avo lenta (ampiasaina amin'ny akanjo avo indrindra, satroka ary amboradara hafa), fanatsarana indostrialy ny fizotry ny peta-kofehy nentim-paharazana, paosin-stitch 16358, izay mamaritra ny aloky ny skyscraper an-tanàn-dehibe telo refy.Kodiarana seza fiara afaka manala havizanana rehefa mitondra fiara, raha mila ianao dia mifandraisa aminay.